नेप्सेमा ३० अङ्क वृद्धि | गृहपृष्ठ
As of 2018-05-24 13:44:26
Home कम्पनि विश्लेषण नेप्सेमा ३० अङ्क वृद्धि
कम्पनि विश्लेषण, लगानी 1 views
नेप्सेमा ३० अङ्क वृद्धि
गत साताको कारोबारमा परिसूचक ३० दशमलव १ अङ्क बढेको थियो । केही समययता निरन्तर ओरालो लागेको बजार गत साता भने केही सुधारिएको थियो । तेस्रो वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने मिति नजीकिँदै गर्दा बजार बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय लगानीकर्ता सङ्घ र इन्भेष्टर्स फोरमको मागप्रति सरकार सकारात्मक भएपछि बजार प्रभावित भएको हो । कारोबारको अघिल्लो २ दिन बजार घटे पनि त्यसपछिका दिनमा परिसूचक बढेको थियो । सो साता लगानीकर्ताहरूले शेयर बजारबाट रू. ३५ अर्ब २८ करोड सम्पत्ति बढेको छ । त्यस्तै, कारोबार रकम करीब ६० प्रतिशत बढेको थियो ।
साताको परिसूचक हेर्दा आगामी दिन बजार बढेमा पहिलो प्रतिरोधात्मक विन्दु १ हजार २ सय ७२ छ भने दोस्रो विन्दु १ हजार २ सय ९४ छ । त्यस्तै, बजार घटेमा पहिलो टेवा विन्दु १ हजार २ सय ७ र दोस्रो टेवा १ हजार १ सय ६४ मा पाउने देखिन्छ । साताको मैनबत्ती चित्र हेर्दा अन्तिम दिन सेतो मारुबोजु आकृति बनाएको छ । सो साताको अन्तिम दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ४६ दशमलव ८१ स्केलमा छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
अघिल्लो साताको अन्तिम दिन १ हजार २ सय २० दशमलव २९ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से परिसूचक गत साताको अन्तिम व्यापार दिन बढेर १ हजार २ सय ५० दशमलव ३९ विन्दुमा पुगेको हो । तर, गत साताको पहिलो व्यापार दिनको तुलनामा अन्तिम दिन भने नेप्से परिसूचक ५४ दशमलव १५ अङ्क बढेको हो । गत साता बैङ्किङ समूहबाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेको थियो । सातामा ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इण्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा अन्तिम दिन ११ दशमलव २ अङ्क बढेर २ सय ६६ दशमलव ८९ अङ्क पुगेको छ । त्यसैगरी, फ्लोट इण्डेक्स पहिलो व्यापार दिनको तुलनामा अन्तिम दिन ४ दशमलव शून्य ६ अङ्क घटेर ९० दशमलव २५ अङ्कमा पुगेको हो ।
बैङ्किङ समूहको परिसूचक ३९ दशमलव ७ अङ्क, विकास बैङ्कको ७८ दशमलव ३८ अङ्क, वित्त कम्पनीको १४ दशमलव ४ अङ्क, लघुवित्तको ९५ दशमलव ३९ अङ्क, होटलको ५६ दशमलव ९३ अङ्क र जलविद्युत्को ७९ दशमलव २ अङ्क बढेको थियो । साथै, बीमा समूहको परिसूचक ३ सय ८४ दशमलव ९९ अङ्क, उत्पादन तथा प्रशोधनको १ सय ३ दशमलव ५५ अङ्क, व्यापारको २ दशमलव ७ अङ्क र ‘अन्य’ समूहको २३ दशमलव ९४ अङ्क बढेको हो ।
गत साता २७ हजार ६ सय ३३ कारोबारबाट १ सय ८१ कम्पनीको ५४ लाख ५० हजार २ सय ६० कित्ता शेयर खरीदविक्री भयो, जसबाट रू. १ अर्ब ६९ करोड ७७ लाख ९२ हजारबराबर रकम परिचालित भयो । यो रकम अघिल्लो साताको तुलनामा १० दशमलव १७ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो साता १ सय ८० कम्पनीको २७ हजार ५ सय २२ कारोबारबाट ५८ लाख ९५ हजार ३० कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको थियो । यसबाट रू. १ अर्ब ८८ करोड ९९ लाख ७९ हजारबराबरको कारोबार भएको थियो ।
सो साता कारोबार रकमको आधारमा नबिल बैङ्क लिमिटेड अग्रस्थानमा छ । यस कम्पनीले गत साता रू. ७ करोड ६७ लाख ३० हजारबराबरको शेयर कारोबार गरेको थियो । त्यस्तै, कारोबार भएको शेयर सङ्ख्याका आधारमा जनता बैङ्क अग्रस्थानमा छ । कारोबार भएको शेयर सङ्ख्याको आधारमा यस कम्पनीले १ लाख ५० हजार कित्ता शेयर किनबेच गरेको थियो । र, कारोबार सङ्ख्याको आधारमा राधी विद्युत् कम्पनी लिमिटेड अग्रस्थानमा छ । यस कम्पनीको २ हजार १ सय १५ ओटा कारोबार भएको थियो ।